MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 864
>Aung Way - Kyaw Thu
>Cartoon Beruma - Fire outbrak in Burma unstoppable
>Acadamy fashion in 2009
> အကယ်ဒမီဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ဆုပန်ထွာ...
>100 knowledges from burmese movies
> မြန်မာကားများကြည့်ပြီး ရရှိလာသော ဗဟုသုတ ၁၀၀အမည်မသိစာဆိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ ၁။ မြန်မာလူမျိုးများသည် အတိတ်ကို ခဏခဏ ပြန်သတိရလေ့ရှိသူများ ဖြစ်ကြပြီး...
>ATBU’s International Conference
> စစ်ကိုင်းတွင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်များ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည်ဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၉ယမန်နေ့က ရန်ကုန်တွင်ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်များအား မိန့်ကြား ရှင်းပြနေသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်များအသင်း (ATBU)၏...
>23rd Nov 2008 – Sunday Weekly Radio Program
> ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ အစီအစဉ် ချစ်သူဝေးဝေး သွားပါနဲ့ – စန္ဒယားချစ်ဆွေ သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ မောင်သြရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (မိုးမခ) အင်စီယူဘီ ကြေငြာချက် မင်းသုဝဏ်ကိုယ်တိုင်ဖတ်တဲ့ ပျဉ်းမငုတ်တို...
>past and present
> ယခင်နှင့် ယခုအရှင်ဉာဏိကဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်။ အဲဒီတုန်းက လူသားတွေ တွေးခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အပြု အမူ။ လူ့ဖြစ်စဉ်လအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲပုံကို ပြောတဲ့အခါတိုင်း ပညာရှင်များက...
>myo ma nyein by Daw Ah Mar
> မြို့မငြိမ်းလူထုဒေါ်အမာဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၉ မြန်မာ့တေးဂီတသမိုင်းတွင် နှစ်ကာလရှည်လျားစွာ တည်တံ့ကျန်ရစ်မည့် သတ္တိများရှိသော မြန်မာသီချင်း (Modern classicism) များကို သီကုံးရေးဖွဲ့သွားခဲ့သည့် မြို့မငြိမ်းကား အသေစော၍ နှမြောထိုက်သည့် မြန်မာ့သားကောင်းတဦးပါပေ။ ဆရာငြိမ်းသည် အနုပညာပါရမီထူးသူ...
> ၈၁ ကြိမ်မြောက် ဟောလိဝုဒ် အကယ်ဒမီကျော်ကျော် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၀၉ ဒီနှစ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ ထူးခြားတာကတော့ အများက ထင်ကြေး သိပ်မပေးထားတဲ့ Slumdog Millionaire ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ...
>NLD statement 19th Feb 2009 Publish at Scribd or explore others: Other Periodicals & Report myanmar NLD အင်န်အယ်ဒီက ၎င်းတို့...
>Win Pe and His Painting –aserial – no 2
> ၀င်းဖေ နဲႚ သူႚပန်းချီကားမဵား စီးရီး- ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>meeting with Buddha
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၂၄)ဆရာတင်မိုး၏ ဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း ကဗျာများထိန်လင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝဝ၉ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ အချိန်တိုခဏလေး အပေါ်မှာ ကြည့်ရှုပြီး ကောက်ချက်ချလို့ မရပါဘူး။ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား...
>media persons conference
> ဆရာများ စုဝေးတိုင်ပင်ခြင်းဇာနည်ဝင်းဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝဝ၉ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာသတင်းသမားတွေ ညီလာခံလုပ် စုဝေးလာတာ ၆ ကြိမ် ရှိပြီ။ လောလောဆယ် ညီလာခံ ပြုလုပ်နေဆဲ၊ မနက်ဖြန် တတိယနေ့၊ နောက်ဆုံးနေ့။ အားလပ်ချိန်မှာ...
>19 political prisoners released
> နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၉ ဦး ထောင်အသီးသီးမှ လွတ်မြောက်အေပီသတင်းဌာနဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ယမန်နေ့က အင်းစိန်ထောင်ရှေ့တွင် သွားရောက် စောင့်ဆိုင်းနေကြသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့၏ မိသားစုများ (photos: AP) ယနေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရသော အကျဉ်းသား...
>Mar Mar Aye – 265
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၆၅)ထူးမခြားနားမာမာအေးဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၀၉ (Photo: Jack Vartoogian) သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ ဝါသနာရှင်တွေ အားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ...
>Maung Swan Yi – Remembering Poet Lay Maung
> ကဗျာဆရာ လေးမောင် မောင်စွမ်းရည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ လေးမောင် (မြင်းခြံ) ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာဟာ “ဖူးကြွေ” ဆိုတော့ ကဗျာဆရာအနေနဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြားခွင့် မရခဲ့ရှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက် ကိုကိုးကျွန်း...
>Students Movement in Burma (06)
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကို အထိ (၆)‘ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်နှင့် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး’အောင်ဝေးဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ ၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံကြီးပြီးတဲ့အခါ ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအကြိမ် စစ်မီးကြီး ထတောက်လာပါတယ်။ ၁၉၃၉ခုနှစ်ခုမှာ ဥရောပနဲ့ အာရှတိုက်မှာပါ...
>the second chiang mai gay parade ban
> မြန်မာပြည်သား ဂေးများ ပါဝင်မည့် ချင်းမိုင်မှ စီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲကို ဒေသခံတို့ ပိတ်ပင်ဓာတ်ပုံသတင်းဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ ပွဲအဖျက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း ဂေး (လိင်တူ မြတ်နိုးသူ)တို့အကြောင်း ရှင်းပြနေသော ကိုအောင်မျိုးမင်း။ (photos: Moemaka) ယနေ့ညနေပိုင်းက...
>junta announces 6,313 convicts to be freed
> အကျဉ်းသား ၆၀၀၀ ကျော် လွှတ်ပေးမည်ဟု စစ်အစိုးရကြေညာအေပီသတင်းဌာနဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြာသပတေးနေ့က ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တွင် ဆန္ဒပြနေသော မြန်မာအတိုက်အခံတဦး (photo – AP )...
>Thit Kaung Eain – To Kill Time, Let’s remember Ko Lwan Ni – Poem
> Microsoft Word – T4T Remembrance.doc အပျင်းပြေ ဆိုပြီး … မောင်လွမ်းဏီကို သတိတရ သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ စားကျက်ထဲ အုပ်စုလိုက် သင်းကွဲနေတဲ့ သိုးအုပ်တွေကြား...
>Mar Lu San – Never Say Good Bye
> နှုတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ် မာလုစံ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉ သူတို့ လာတော့မယ် တဲ့။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဧပြီလကတည်းက လာမယ် ကြားနေခဲ့တာ ရှစ်လလောက် ကြာပြီးကာမှ ဗြုန်းစားကြီး ရောက်ချလာကြတယ်။...
>movies made in China and India
> တရုတ် နှင့် အိန္ဒိယရုပ်ရှင်များအကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ ကုလားကားတွေမရှိရင် ဘယ်တော့မှ မသိနိုင်မယ့် အချက်တွေကတော့ ၁။ မင်းသားဟာ အပြင်းထန်ဆုံး အရိုက်အနှက် ခံနေရချိန်မှာတောင် နာကျင်ပုံ မပြပေမယ့် မင်းသမီးက အနာကို...
>Shwe Pyi Aye 01
> အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေပြည်အေး၊ ဒေါ်အေးမိ နှင့် ပန်းဟေဝန်မောင်ညွန့်နွယ် (စန္ဒရား)ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၊ ၂၀၀၉ ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ဖခင်ကြီး ဦးအုန်းမောင်မှ စတင် ရိုက်ကူးတင်ပြခဲ့သည့် ‘မေတ္တာနှင့်သူရာ’ ဇာတ်ကားမှ စတင်၍...
>One Burmese activist deported from Singapore ended in Jakata as refugee and stranded
> စင်္ကာပူက နှင်ထုတ်ခံရသူ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတဦး အင်ဒိုနီးရှားမှာ သောင်တင်နေဆဲ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူ လူငယ်တဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်စိုးသည် စင်္ကာပူတွင် တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးအငြင်းခံရပြီး...
>Thit Kaung Ein – San Fran Upstream Poem
> ဆန်ဖရန် အဆန် သစ်ကောင်းအိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ ဂိုးဒင်းဂိတ်တံတားကြီးပေါ်မှာ ကျနော်ကလည်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာ။ ရေပြာပြာ … ကျွန်းထီးထီး … အမြီးဖွက်ထားတဲ့ သတ္တ၀ါများ။ အဲဒီ လင်းယုန်တောင်ပံ အထက်စီးက...
>Burmese Journal Digest – Feb 20, 2009
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၀၉ ရွှေတိုင်ညွန့်၊ ရွှေပြည်အေးနှင့် မြို့မငြိမ်း – ဂန္ထ၀င်တေးရေးဆရာကြီး ၃ ဦး ရာပြည့် စာတမ်းဖတ်ပွဲ...
Page 864 of 933«1...862863864865866...933»